Uma uphupha ukuthi ubuka izinwele zakho uzothola uthando maduzane kodwa lowo muntu kungenzeka ukuthi uthanda omunye umuntu.
Uma uphupha ukuthi ukama izinwele zakho kusho ukuthi uzolahlekelwa yinto ebalulekile kanti ukushintsha umbala wezinwele zakho kusho ukuthi kunenkathazo ezayo.
Uma izinwele zakho sezikhule kakhulu zizinde kusho ukuthi usungumqambimanga futhi uma sezibomvu kufanele uqaphele izitha empilweni yakho. Uma ziphuma izinwele zakho kusho ukuthi ukhathazekile ngenxa yabanye abantu.
Uma unempandla kusho ingcebo nempilo kwabesilisa nokuhlupheka ngokwezemali kwabesifazane. Uma owesilisa ozwana naye enempandla ephusheni lakho akufanele ngabe nindawonye futhi nizoba senkingeni maduzane.
39 thoughts on “Amaphupho ngezinwele”
Kuchaza ukuthini ukuphupha uziqhuqha inkwethu ekhanda?
Msweli! Mpisela yakoNgonyama eyadela umkhonto yathatha izembe ngoba lingumasheshisa! Mageza ngegolide kube kuphuza abafokazane ngezansi! Ulwazi esinalo yilolu: https://iafrika.org/amaphupho-ngokugeza/
uma uphupha umuntu ekubonisa izinwele kusho ukuthini?
Ulwazi esinalo oluthinta ukuphupha ngezinwele yilolu osulufundile kwisigaba “Amaphupho ngezinwele”. Konje nihlobene yini noKhanyile: https://iafrika.org/izithakazelo-zakwakhanyile/ ?
Ngiphuphe umuntu engingazwani naye ngimuqaqa ikhanda cela ukwazi ngaleliphupho ngisheshe ngizisize
Ngiphuphe ubaba wezingane engigunda
Nansi incazelo esinayo lapho kunomyeni ephusheni lakho, bheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngonkosikazi-noma-umyeni/
Ngiphuphe ubaba wezingane angigunda
17/12/2019 at 18:29
10/12/2019 at 06:31
Kusho ukuthini ukuphupha isihlobo sakho sesilisa sizigunda izinwele iAfro sizifaka epuletini sizidla.
11/12/2019 at 22:45
Liyaphindaphinda yini leliphupho noma uphuphe kanye nje? Yini enye oyibonayo noma eyenzakalayo kuleliphupno lakho? Impendulo yakho ingasiza ukunemba incazelo yephupho lakho.
Kush ukuthin ukuphupha unezinwele zinkulu uzikama kodwa ube uneshort hair
Ulwazi esinalo ngokuphupha izinwele yilo lolu osulufundile. Mhlawumbe kungasiza uma ungathi xaxa ngokuthi yini enye oyibonayo ephusheni lakho. Liyaphindaphinda yini noma waphupha nje kanye? Singajabulo ukuzwa kabanzi futhi lokho hleze kube nemiphumela yosizo ekuchazeni iphupho lakho.
Mina ngiphuphe bengisusa inkwethu ekhanda bengicela ningiphe incazelo yalelophupho
Aliphindaphindi ngaphupha nje engath sihleli endlin enguround owesilisa engicwala ikhanda engikuso inkwethu ,izolo ngaphuma ngathi ngika boyfriend lo boyfriend uyiwele ngageza sigezela ukulala ngithe ngiqeda ukugeza ngaphaphama
Mina ngicela ukubuza,ngiphuphe umyeni wami egundile,ekbeni uhlezi enezinwele akagundi
Nalu ulwazi esinalo ngokuphupha umyeni wakho: https://iafrika.org/amaphupho-ngonkosikazi-noma-umyeni/
Ngale kokuthi ugundile yini enye oyibonayo noma eyenzakalayo? Leli yiphupho eliphindaphindakho into efanayo yini noma uphuphe kanye nje?
Ngiphuphe udadewethu enezinwele ezinde ngbe kusho ukuthini lokho?
28/08/2019 at 18:05
Nalu ulwazi esinalo ngokuphupha udadewenu: https://iafrika.org/amaphupho-ngomfowenu-noma-udadewenu/
Kushoni ukuphupha umuntu wesilisa egundile
28/08/2019 at 20:05
Kwesinye isikhathi ukugunda kuhambisana nokuzila. Nalu ulwazi esinalo ngencazelo yamaphupho okuzila: https://iafrika.org/amaphupho-ngokuzila/
23/12/2018 at 18:08
19/04/2019 at 05:05
Ukuphupha ingane yakho izigunde izinwelwe
Kwesinye isikhathi ukugunda kuhambisana nokuzila. Nalu ulwazi esinalo ngokuphupha ngokuzila: https://iafrika.org/amaphupho-ngokuzila/
12/09/2019 at 21:41
Nalu uwazi esinalo oluthinta ukuphupha ngezinwele: https://iafrika.org/amaphupho-ngezinwele/
Nalu ulwazi esinalo oluthinta ukuphupha ngezinwele: https://iafrika.org/amaphupho-ngezinwele/
24/05/2016 at 11:32
02/02/2016 at 15:51